Hoggaanka Golaha shacabka oo lala wareegay! - Ahmed Abdihadi
Jaamacadda Oxford in aad gasho waxaa ka horraysa in aad u qalanto aqoon ahaan, caqli ahaan iyo mas’uuliyad ahaanba. Sidoo kale, markaad gasho jaamacadda Oxford waxaad tahay qof la hubo aqoontiisa iyo kartidiisaba.
Jaamcada Oxford ka jaamacad ahaan ayay qiima u leedahay, ardayga dhigtana arday ahaan ayuu macna u leeyahay.
Dhinaca kale, Golaha shacabka Soomaaliyeed ka hay’ad ahaan ma dhisno oo akhlaqiyaad iyo dhaqan fiican, dastuur ilaalin iyo shacabka oo dantooda la matalo kam jirto.
Sidoo kalana, qofka ka shaqeeya ee soo gala wax nuxur ah oo uu xanbaarsanyahay ma jiro. Qof mushaarka ka qaata, qof gancsi ku ilaashada, iyo qof mooshinada ka shaqaysta, iyo kuwa madaxda laanta fulinta u adeega ayay iskugu jiraan.
Xubnaha ugu awoodda badan golaha shacabka waxay leeyihiin marfashayo/majlisyo lagu qayilo. Sababta ay marfashiyada mirqaanka iyo majlisyada u samaysteen ayaa waxay tahay in ay ku kasbadaan xildhibaanno badan oo ay ku ololayn karaan marka ay xaaladu siyaasadeed jiraan sida si khilaafyo iyo mooshino.
Barlamaanka Soomaaliya dhexdiisa kama jirto fikiradaha casriga ee hannaanada dowladnimda lagu hago sida falsafooyinka iyo afkaarta siyaasadeed. Dhammaan wixii diinta islaamka, hannaanka dowliga iyo akhalaaqada wanaagasan reebeen ayay xubnihiisu ku dhaqmaan.
Xog badan oo aan fikir ahaan iyo qoraalo laga sameeyay hab dhaqanka barlamaanka ka kasbaday, waxaa ii raacay baryahan danbe oo aan waqti fiican ku bixiyay u kuurgalidda dhaqanka hoggaanka Goloha. Waxaan Villa Hargaysa oo ah xarunta labaad ee Barlamaanka joogay habeenkii la lahaa qofkasta kursigiisa tunta ha saarto!
Haddaba, Guddoonka Barlamaanka ayaan rabaa in aan dhowr arrin idiinka sheego:
Waxaa toos u la wareegay Madaxweyne Farmaajo. Dhamaann shurucuudii iyo astayntii kuraasta ee baryahan danbe boobsiiyeen waxaa saas u rabay Madaxweyne Farmaajo.
Hadalkii shalay uu Guddoomiye Maxmed Mursal ku hadalay ee ahaa in Golaha shacabku uu go’aan ka gaarayo hannaanka doorashooyinka wuxuu kamid ahaa qorshayaashii madaxweyne Farmaajo rabay in ku khalkhal galiyo maamul goboleedyada Dhuusamareeb ku shiraya.
Seddexda guddoomiye waxay walwal ka qabaan sidii ay u soo laaban lahaayeen. Sheekadan ah kuraasta qofkasta tunka ha saarto waxay ka mid tahay cabsi ay ka qabaan in aysan soo laabanin. Tusaale fiican waxaa u ah guddoomiye kuxigeenka labaad oo kursigiisii meel uu dhiga la’ asaga oo baxsad kala ah dadkiisa.
Hadaba, waa in aad u fahantaan in uusan jirin Gole shacab oo maanta ka fikirya in dalka laga badbaadiyo kala guurka ee waa dad markii horana aan akhalaaqiyaad dowlo iyo mid bulsho wax ku wadin haddana ka walwalsan in ay soo laaban karaan.